UAE oo Dib u soo Celinaysa Hooyo Soomaaliyeed iyo Gabar ay Dhashay – Radio Daljir
Maarso 1, 2016 7:11 b 0
Burtinle, 01March, 2016 -(Daljir)_Hadal ka soo baxay Boliska magaalladda Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay soo af-jareen dhibaato haysatay gabar Somali oo iyada iyo hooyadeeda lagu qabtay Garoonka Caalamiga ee Diyaaradaha ee magaalladda Dubai.
Boliska Dubai iyo Qunsuliyadda Somalia ayaa iska kaashaday sidii gabadha loogu samayn lahaa Aqoonsi caadi ah, iyadoo Boliskana ay u iibiyeen Tikidhka Diyaaradda, si dib loogu soo celiyo Somalia.
Taliyaha Boliska Rashiidiyah ee magaalladda Dubai, Jeneral Saciid Xamad Bin Suleymaan ayaa sheegay inay Waaxda Ammaanka ee Garoonka Dubai ku soo wareejiyeen Hooyada Soomaaliyeed iyo gabadheeda oo iyagu doonayey inay Baasaboor la been abuuray ugu dhoofaan dalka Britain, si ay uga helaan Magangelyo Siyaasadeed.
Jeneral Bin Suleymaan waxa uu sheegay inay gudaha Imaaraadka ka raadiyeen dad ehel la ah gabadha, balse ay ka waayeen, wuxuuna xusay inay Boliska la xiriireen Ayeeydeeda oo ku sugan Somalia, taasi oo sheegtay inay diyaar u tahay in loo keeno gabadha ay Ayeeyda u tahay.
Tijaabo dhinaca Hiddo-sidaha ee DNA oo laga qaaday gabadha iyo Hooyadeeda ayaa muujiyey inay isir-wadaag yihiin.
Dhinaca kale, Hooyadda iyo Gabadheeda ayaa la qabtay, kadib, markii ay ka soo dhoofeen Somalia, iyagoo Transit ku ah Garoonka Diyaaradaha ee Dubai, kuna sii jeeday dalka Baxrayn oo ay kaga sii gudbi lahaayeen dalka Britain.
Haweeneyda iyo gabadheeda ayaa la sheegay inay wateen Baasaboor British oo la been abuuray, waxayna Saraakiisha Garoonka Dubai ka shakiyeen gabadha oo magaca Baasaboorka ku qoran uu ahaa magac lab.
Saraakiisha waxay kaloo ka shakiyeen iyadoo gabadha timaha laga jaray si loogu ekeysiiyo wiil, waa sida laga soo xigtay Saraakiishaasi.
Hooyadda oo baaritaan lagu sameeyey ayaa sheegtay inuu Baasaboorku yahay Macmal, kana soo qaateen Somalia, waxayna xustay inuu qorshahooda ahaa inay ugu dhoofaan dalka Britain, si ay uga helaan Magangelyo Siyaasadeed.
Shirka Barlamaanada Afrika oo Maanta Furmay